मधेसका माँगहरु सरकारले सम्बोधन संगै लिखित कार्यन्वयन नगरे सम्म आन्दोलन नरोकिने
वीरगन्ज २० माघ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसका माँगहरु सरकारले सम्बोधन संगै लिखित कार्यन्वयन नगरे सम्म आन्दोलन नरोकिने बताउनु भयो ।
नेपाली औषधि उद्योगका अभिभावक अमात्यको निधन (को हुन् अमात्य ?)
वीरगन्ज २० माघ नेपाल फर्मास्युटिकल ल्यावरेटोरी (एनपिएल)का प्रबन्ध निर्देशक महेन्द्रबहादुर अमात्यको निधन भएको छ ।
जनकपुरमा बमको हल्लाले सर्वसाधारण त्रसित
२० माघ, धनुषा। जनकपुरको जानकीचोकमा बम रहेको हल्ला चलेपछि जनकपुर बजारमा त्रास छाएको छ ।
राजु रिजाललाई आईसीसीको क्लिन चिट: बढी उमेरको कुनै प्रमाण छैन
अनमोलकाे जोडीः सबै डेब्यू नायिका मात्र, पुरानासँग देखिदैनन् चकलेटी हिराे
संघीय समाजवादी फोरमको विवाद उत्कर्षमा । वीरगंज २०,माघ / संघीय समाजवादी फोरम नेपालभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । असन्तुष्ट समूहले संघीय नव विचार समूह बनाएर छबुँदे माग सम्बोधन गर्न नेतृत्वला
मोर्चाको अब बस्ने बैठकले जारी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने
काठमाडौं, माघ २० – मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताले मोर्चाको अब बस्ने बैठकले जारी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा बुधबार गरिएको साक्षात्कारमा उनीहरुले एकै खाले आन्दोलन लामो समयसम्म लैजान नसकिने र आन्दोलनले सबैभन्दा बढी तराई मधेसकै जनता पीडित बन्दै गएकोले स्वरुप परिवर्तन गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउने बताए ।
उत्तर कोरियाको भूउपग्रह प्रक्षेपण तयारी, नष्ट गरिदिने जापानको चेतावनी
माघ २० – उत्तर कोरियाले चाँडै नै भूृउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने जनाएपछि जापानले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ । जापानले आफ्ना सैनिकलाई सतर्क अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ ।
बलिउड अभिनेत्री प्रियंकाले ओस्कारमा अवार्ड दिने
काठमाडौं, माघ १९ – बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा निकै सफल मानिन्छिन् । अभिनयमा मात्रै नभई उनले अफूलाई गायन क्षेत्रमा पनि स्थापित गरेकी छिन् ।
काबुलको प्रहरी मुख्यालयमा आत्मघाती बम विस्फोट
माघ १९ – अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा रहेको प्रहरी मुख्यालयमा आत्मघाती बम विस्फोट हुँदा २० जनाको ज्यान गएको छ ।
अस्ट्रेलिया न्युजिल्याण्डसँग १५९ रनले पराजित
माघ २० – न्युजिल्याण्डसँगको तीन एक दिवसीय क्रिकेट श्रृँखलाको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलिया पराजित भएको छ । अक्ल्याण्डमा भएको खेलमा घरेलु टोली न्युजिल्याण्डले अस्ट्रेलियालाई एक सय ५९ रनले पराजित गरेको छ ।
एउटै नम्बरका पाँचवटा लाइसेन्स बग्गीखानामा !
२१ माघ, काठमाडौं । करिब पाँच महिनादेखि एउटा लाइसेन्स ट्राफिक महाशाखामा लडिरहेको थियो । ०८-१३७५५९ नम्बरको त्यो लाइसेन्स लिन लाइसेन्सवाला कोही पनि आएन ।
वीरगन्ज नाका पनि खोल्नुपर्नेद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो
माघ २१, २०७२- सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले तत्काल वीरगन्ज नाका पनि खोल्नुपर्ने बताएका छन् । मोर्चाका नेताहरू महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले नाकाबन्दी जारी रहने बताइरहेका बेला सद्भावना अध्यक्ष महतोले वीरगन्ज नाका पनि खोल्नुपर्ने बताएका हुन ।
इरफानले अस्विकार गरे स्पिलवर्गको फिल्म
बलिउड अभिनेता इरफान खानले हलिउडका चर्चित निर्देशक स्टिवन स्पिलवर्गको नयाँ फिल्ममा अभिनय गर्न अस्विकार गरेका छन् । सिन्डलर्स लिस्टदेखि जुरासिक पार्कसम्मका चर्चित फिल्मका निर्देशक स्पिलवर्गलाई हलिउडका सबैभन्दा सफल निर्देशक मानिन्छ ।
मोर्चाको बन्दका कारण जनकपुरको जनजीवन प्रभावित
माघ २१ – संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित आन्दोलनरत पक्षले आह्वान गरेको अनिश्चितकालिन बन्दका कारण जनकपुरको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
नेपालसहित विश्वभर क्यान्सर रोगका विरामी बढ्दै गएका छन् । यसरी क्यान्सर बढ्दै जानु भनेको व्यक्तिको आफ्नै कारण हो ।
१ सय ३५ दिनपछि खुल्यो वीरगञ्ज नाका
वीरगञ्ज, २२ माघ १ सय ३५ दिनदेखि बन्द वीरगञ्ज नाका शुक्रबारबाट खुलेको छ । असोज ७ गतेदेखि बन्द वीरगञ्ज नाका शुक्रबार स्थानीय व्यवसायीले खुलाएका हुन् । मितेरीपुलस्थित धर्नास्थलमा आन्दोलनकारी कम भएका बेला
सधैंका लागि प्रधानमन्त्री नभएको र प्रधानमन्त्री पद छाड्न हतारो पनि नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, माघ २२ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कामप्रति प्रश्न उठाउन नदिनेगरी काम गर्ने दाबी गरेका छन् । प्रेस चौतारी नेपालको १८औं स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले